Biiroon Qonnaa Oromiyaa gabaa tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiru beeksise – Fana Broadcasting Corporate
Biiroon Qonnaa Oromiyaa gabaa tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiru beeksise
Finfinnee, Qaammee 5, 2011 (FBC) – Biiroon Qonnaa Oromiyaa gabaa tasgabbeessuuf hojjechaa akka jiru beeksise.
Ayyaana bara haaraa ilaalchisuun daballii gatii hin malle to’achuudhaan gabaa tasgabbeessuuf hojjetamaa akka jiru hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa beeksisan.
Obbo Dhaabaan ibsa miidiyaaleef keennaniin akka ibsanitti, bara Oomisha 2011 omishni kan yeroo biraarraa kan dabale ta’uusaa himanii, oomishtootaa fi fayyadamtoota jidduu qaamni jiru qaala’iinsa gabaa akka uume himaniiru.
Rakkoo kana hiikuufis qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni omishasaanii karaa ijaarameen yuuniyeenii fi waldaalee hojii gamtaatiin fayyadamtootaaf akka dhiyaatu taasifamaa jira jedhaniiru.
Ayyaana bara haara sababeeffachuunis gabaa tasgabbeessuuf jecha magaalaa Finfinneetti giddu gala Aadaa Oromotti agarsiisnii fi baazaariin qophaa’uun qonnaan bulaan omishasaa kallattiidhaan karaa gurmaa’een fayyadamtootaaf akka dhiyeessu taasifamaa jira jiraachuus dabalanii himaniiru.
Fayyadamtoonnis ayyaanichaaf waan shamatatan gatii madaalawaadhaan omishtootarraa akka shamatatan Obbo Dhaabaan dhaamaniiru.
Baatii Onkololeessa Birriin biiliyoona 32.6 walitti qabame
Baankiin Daldalaa fi Daandiin Qilleensaa Ityoophiyaa kaffaltii elektirooniiksii…
Gatiin boba’aa baatii Sadaasaatti akkaata duraan tureen kan itti fufu himame
Carraa hojii waaraa fi bu’a qabeessa ta’e mijeessun xiyyeeffannaa…